आयुर्वेद Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperआयुर्वेद Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
नेपालमा कयौं प्रकारका मसलाहरू उत्पादनसँगै दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात तथा निर्यात गर्ने गरिएको छ । मसलाको प्रयोग तरकारीमा आवश्यकताअनुसार स्वादिष्ट बनाउन तथा अन्य थुप्रै खाद्य पदार्थ बनाउनका लागि उपयोग गर्ने परम्परा शदीयौंदेखि चलिआएको छ । यस्ताखाले मसलाको प्रयोगबाट मानव शरीर सन्तुलन राख्नुका साथै ग्रह तथा नक्षत्रहरूको नकारात्मक प्रभाबबाट जोगाउन पनि ऋषि महर्षीहरूले पुर्खाहरूलाई […]
काठमाडौँ -मेथिको साग स्वादका लागि नभई स्वास्थयका लागि पनि उतिकै फाईदा जनक मानिन्छ छ । यसको साग प्राय मानिसहरुको भान्सामा पाक्ने गर्दछ । यो स्वास्थका लागि निकै फाइदा हुन्छ । मेथिको सागलाई भान्सामा तरकारीको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । यसको नियमित प्रयोग गर्दा स्वास्थय लाई निको पार्ने काम यसले गर्दछ । बजारमा यो प्रशस्तत मात्रामा […]
हरेक भान्सामा गरम मसलाको रूपमा दालचिनी प्रयोग गरिन्छ । तर दालचिनी केवल मसला मात्र होइन यो उच्च गुणस्तरको औषधि समेत हो । दालचिनीमा एन्टिसेप्टिक, एन्टिफंगल र एन्टिभाइरल तत्व हुन्छ । के के औषधीय गुण छ त दालचिनीमा ? १. आधा चम्चा दालचिनीको धुलो एक चम्चा महसँगै रोगीलाई खानाअघि दिनहु दिएपछि एक सातामा आर्थराइटिसको दुखाइमा कमी […]
मानदत्त रावल जुम्ला, २२ पुस । कर्णाली आयुर्वेद औषधालयमा औषधि अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । एक महिनादेखि औषधि अभाव भएपछि औषधालयमा आउने बिरामी मर्कामा परेका हुन् । स्थानीय जन्मकन्या रावतले औषधि नहुँदा आफू खाली हात फर्कन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो । औषधिको अभाव भएपछि औषधालयमा कार्यरत छ कर्मचारीले कार्यालय खोल्ने र हाजिर लगाउने […]
जाजरकोट, २१ पुस । जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधनका साथै खेतीका लागि डिभिजन वन कार्यालय, जाजरकोटले पहल शुरु गरेको छ । सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा जाजरकोटका सातवटै स्थानीय तहमा यस्तो कार्य अगाडि बढाइएको हो । जडीबुटीको भण्डार मानिएको जाजरकोटमा डिभिजन वन कार्यालयले जडीबुटी भण्डार तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका साथै उद्यम स्थापना गर्न लागिएको […]
रुकुमपूर्व, ४ पुस । जैविक विविधता संरक्षण अभियानमा सक्रियरुपमा लाग्न जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वातावरणीय सन्तुलन बिगँदै गइरहेका बेला रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिमका जनप्रतिनिधिले वातावरणीय सन्तुलनलाई कायम राख्न जैविक विविधताको संरक्षण महत्वपूर्ण भएको बताएका छन् । जैविक विविधताको संरक्षण नगरे कुनै पनि प्राणीको अस्तित्वसमेत नरहने भन्दै अब नीतिनियम बनाएरै भए पनि जैविक विविधता संरक्षणमा लाग्ने रुकुमपूर्वको […]
मङ्गलबारे, २० मङ्सिर । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा १५ श्ययाको आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । प्रदेश नं १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाको मातहतमा सो अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो । सूर्योदय नगरपालिका–४, आइतबारेमा रहेको मेची अञ्चल आयुर्वेद औषधालय पहिलादेखि नै सञ्चालनमा आएको भए पनि स्तरोन्नति गरेर १५ श्ययाको अस्पताल बनाइएको हो । मेची अञ्चल […]
काशीराम शर्मा बाँके, १३ मङ्सिर । झ्याउ सङ्कलन तथा निकासीमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न यहाँका व्यवसायीले माग गरेका छन् । राज्यले हचुवाको भरमा झ्याउ सङ्कलन तथा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आफ्नो लगानी डुबेको भन्दै जडीबुटी व्यवसायीहरुले वैज्ञानिक अध्ययन गरी संकलन तथा निकासीको वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राज्यले झ्याउ सङ्कलन तथा निकासीमा प्रतिबन्ध […]
केदार मगर खोटाङ, ८ मङ्सिर । केपिलासगढी गाउँपालिकाले आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र पाइने भीर माहुरीको मह काढ्दा अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भीर माहुरीको मह पछिल्लो समय स्थानीयवासीले अवैध रुपमा काढ्ने र अन्यत्र निकासी गर्न थालेपछि नियन्त्रण र संरक्षण गर्न सो गाउँपालिकाले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । गाउँपालिकाभित्र […]